कहानी परभक्षी: Hansel र Gretel | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
तपाईं दन्तिये प्रेम भने त तपाईं कहानी परभक्षी जस्तै खेलमा रुचि हुनेछ: Hansel र Gretel. यो एक धेरै लोकप्रिय कथा छ रूपमा कुनै पनि परिचय आवश्यक छैन. येस्मा मोबाइल फोन स्लट कुनै जम्मा बोनस खेल, त्यहाँ पाँच रील र दस निश्चित paylines तपाईं 10p बीच शर्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ र £ 200 प्रति स्पिन हो. जहाँ भाइ र बहिनी जोडी पहिलो नजर मा कुनै पनि दुष्ट चुडैल तल शिकार एक वन रक्षक बाहिर छन् को स्लट एक रहस्यमय मध्यरात को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. को ध्वनि र संगीत सुन्दर एनिमेटेड दृष्य संग तपाईं सबै साथ मनोरंजन राख्न.
कहानी परभक्षी विकासकर्ता बारेमा: Hansel र Gretel:
यो विकासकर्ता सुन्दर थिम्ड मोबाइल फोन स्लट कुनै जम्मा बोनस खेल NetEnt छ, रमाइलो र मनोरञ्जन को उच्चतम स्तर प्रस्ताव अद्भुत स्लट शीर्षक संग आधुनिक क्यासिनो खेल समाधान मा अग्रगामी को एक. आफ्नो सबै खेल उन्नत गेमिङ प्रविधि अद्वितीय र अन्तरक्रियात्मक सुविधाहरू प्रदान प्रयोग निर्मित छन्.
यो मोबाइल फोन स्लट कुनै जम्मा बोनस खेल Hansel प्रतीक छ, आफ्नो बहिनी Gretel, कहानी परभक्षी लोगो र खेलको प्रतीक रूपमा केही स्वादिष्ट कैंडी. को परी कथा लोगो तपाईँलाई धेरै जब यो एक पंक्ति मा पाँच पटक देखा र दिएको हो दिन्छिन् 40 पटक आफ्नो एक इनाम को रूपमा कुल शर्त रकम. सबै WINS धेरै जादुई देखिन्छ कि प्रत्येक प्रतीकको सुन्दर एनिमेसन प्रकट. यो स्लट को बोनस प्रतीक सेतो कबूतर र एक सन्दुक छन्.
जंगली & ध्रुवीय: सेतो कबूतर खेल जंगली प्रतीक प्रतिनिधित्व र रील मा मात्र देखिन्छ2&4आधार खेल समयमा र रील समावेश 1 &5निःशुल्क spins समयमा. यो सबै स्क्याटर सुविधा प्रतिनिधित्व जो सन्दुक प्रतीक बाहेक लागि समेट्छ र यसलाई बोनस सुविधाहरू अनलक. जब तीन वा बढी खजाना चेस्ट देखिने, बोनस खुला छ र तपाईंले तीन बाकसहरू एक छनोट गर्न आवश्यक. तपाईं सिक्का जीत प्राप्त गर्न सक्छन्, निःशुल्क spins वा बोनस खेल जहाँ तपाईं t0 जित्न सक्छौं 120 पटक आफ्नो शर्त रकम.
परी आश्चर्य: यो मा गेमप्लेको समयमा मोबाइल फोन स्लट कुनै जम्मा बोनस खेल, एक परी अंधाधुंध देखिन्छ र तपाईंले बोनस उपहार दिन्छ. त्यो wilds मा या शीर्ष मूल्य प्रतीक वा एक प्रकारको प्रतीक भनेर ठूलो जीत मा परिणाम को एक मा स्लट मा अनियमित प्रतीक को स्ट्याकहरूको धर्मान्तरित.
यो जादुई मोबाइल फोन स्लट कुनै जम्मा बोनस खेल तपाईं आफ्नो शर्त मात्रा केही विशाल लाभ बनाउन मदत गर्न सक्छ कि एक भव्य सानो परी मदत धेरै आश्चर्य प्रदान गर्दछ.